Ku alla kii idin aqbalaa wuu i aqbalaa; oo ku alla kii i aqbalaa, wuxuu aqbalaa kan i soo diray. Ku alla kii xaq ah ku aqbala nin xaq ah aawadeed wuxuu heli doonaa abaalgud xaq ah (Matayos 10, 40-41 Schlachter translation).
Beesha iimaanka ee aan xukumo (oo aniga ii ah mudnaan aniga ii ah) iyo aniga qudhayduba waxaan isbadal ballaaran ku sameynay caqiidada iyo fulinta aaminsanaantaas labaatankii sano ee la soo dhaafay. Kaniisaddeenna waxaa ku xirnaa sharci waxaana ay deg deg ahayd in la aqbalo injiilka nimcada. Waxaan gartay in dhammaantood aysan aqbali karin isbeddeladaan qaarna ay aad uga xanaaqi doonaan.
Laakiin waxa aan la filayn waxay ahayd qiyaasta nacaybka loo haystay aniga shakhsi ahaan. Dadka isku magacaaba Masiixiyiin muu muujin Masiixi badan. Qaar baa runtii warqad ii soo qoray si ay ugu duceeyaan geerida degdegga ah. Qaar kale waxay ii sheegeen inay jeclaan lahaayeen inay kaqeyb qaataan fulinta dilkeyga. Tani waxay i siisay faham qoto dheer markay Ciise ku yidhi in qofkii doonaya inuu ku dilo uu u malayn doono inaad Ilaah u adeegayso (Yooxanaa 16,2: XNUMX).
Baybalku wuxuu noo sheegayaa "cabsidu jacayl kuma aha". Taa bedelkeeda, "jacaylka kaamil ahi baqdin bay leeyihiin" (1 Yooxanaa 4,18:XNUMX). Maahan cabsidaas guud in ay kalifto jacaylka. Markii aan dib u wada xasuusto, weerarada shaqsiyadeed dhib badan iguma qabaan hadda. Waan jeclaan karaa kuwa i neceb maxaa yeelay Ciise wuu jecel yahay, xitaa haddii aysan si buuxda uga warqabin dhaqdhaqaaqa jacaylkiisa. Waxay iga caawineysaa inaan waxyaabaha u qaato xoogaa nasasho yar.